10 dagaalame iyo Qaadi weyn oo Al-Shabaab looga qabtay howlgalkii Toora-Toorow – Hornafrik Media Network
Wararka ka imaanaya deegaanka Tooratoorow ee gobolka Shabellada Hoose ayaa sheegaya in lagu qabtay toban ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Ciidanka kumaandooska Danab ee ka tirsan xoogga dalka oo ka dhaqaaqay Garoonka Balli-doogle ee duleedka degmada Wanlaweyn ayaa bilaa dagaal shalay kula wareegay deegaanka Tooratoorow, kadib markii ay ka carareen inta badan Al-Shabaab-kii ku sugnaa.
Ciidanka Danab oo hawlgal baaritaan ahaa ka sameeyay qaybaha kala duwan ee xaafadaha Tooratoorow ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen 10 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaa oo uu ku jiray Garsoore Maxkamad ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka.
Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin, Taliyaha Guutada 16aad ee Ciidanka kumaandooska Danab, ayaa xaqiijiyay inay gacanta ku dhigeen 10-kaas nin oo ka tirsan Al-Shabaab, uuna ku jiro gudoomiyihii Maxkamadda Al Shabaab ee gobolka Shabellada Hoose, Macalin Abuukar.
“Ciidamada waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan toban ka tirsan maleeshiyada, oo uu ka mid yahay horjoogihii Maxkamadda gobolka Shabellada Hoose, Macalin Abuukar.” Ayuu yiri Taliyaha.
Taliyaha oo la hadlay Radiyaha ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xusay in Tooratoorow ay ku taalay maxkamaddii ugu weyneyd ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Shabellada Hoose, taasoo sida uu sheegay lagu baadi jiray shacabka Soomaaliyeed, iyadoo looga qaadi jiray buu yiri lacago baad ah.
Gaashaanle Ismaaciil Maalin ayaa ku waramaya inay sii wadi doonaan gulufka militeri ee Al-Shabaab looga saarayo dhulka ay kaga sugan yihiin gobolka Shabellada Hoose.
Gudoomiyaha Maamulka gobolka Shabellada Hoose, Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa isna sheegay in hawlgalkan uu qayb ka yahay howlgaladii Shabaab looga saarayay gobolkaasi.